Tani waa sida cajiibka ah ee fikraddan Apple Remote cusub ee Apple TV u egtahay | Waxaan ka socdaa mac
Tani waa sida cajiibka ah ee fikraddan Apple Remote cusub ee Apple TV u egtahay
Maalmo ka hor ayay ahayd markiisii bal qiyaas sida watchOS 8 noqon karo. Hada kooxda 9To5Mac naqshadeynta Remote-ka Apple. Kontaroolka fog ee Apple TV, sida loogu neceb yahay sida loogu jecel yahay, waxaa gebi ahaanba bedelay mala-awaalka yaa doonaya Apple TV inuu noqdo aalad ka baxsan qurxinta qolkeena fadhiga. Iyada oo faa'iido leh isla markaana isla markaa xakameyn qurux badan leh. Aan aragno sidaad u maleynaysid qaabkan cusub.
Way cadahay in Remote-ka Apple uu yahay mid ka mid ah aaladaha lagu wadahadli karo wada hadal badan oo la xiriira Apple. Sida loo neceb yahay sida la jecel yahay qaar badan oo ka mid ah kooxda koowaad waxay ku dambeeyaan iyagoo isticmaalaya iPhone ama Apple Watch si ay u xakameeyaan Apple TV. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa diidaya inay iska daayaan telefishanka hago, in kasta oo isbeddelada qaarkood ay jiraan.
1 Apple Remote oo leh qalab iyo softiweer la yaqaan. nano iPod iyo watchOS
2 USB-C si ay ugu soo dallaco kontaroolaha cusub
3 Raadi My Apple Remote
4 Shaashad badan oo taabasho badan
Apple Remote oo leh qalab iyo softiweer la yaqaan. nano iPod iyo watchOS
Fikradani waxay ku saleysan tahay suurtagalnimada in la arko Apple Remote oo saldhigeedu dhab ahaan noqon doono kan iPod Nano oo wata softiweer ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan Apple: Apple Watch. Badhannada aan u baahanahay inaan ku xakameyno Apple TV waxay horeyba ugu jiraan kiiska caadiga ah ee Ipod nano. Waxaa jira badhamada mugga dhinaca si loo xakameeyo heerka wax soo saarka maqalka. Waxaa jira badhan dhinaca ah oo loo isticmaali karo in dib loogu laabto. Badhanka hurdada iyo tooska ee dusha sare ayaa hurdo gelin kara jiifka si uu u badbaadiyo batteriga. Adoo riixaya si aad udhaqaajiso kontoroolka fog, waxaad ku mari kartaa shaashadda si aad u dhaqaajiso TV-gaaga dhabta ah.
Isticmaalayaashu waxay si dhakhso ah ugu heli lahaayeen codsiga fog. Markaad laba jeer ku dhufato badhanka bilowga si toos ah ayaa looga bilaabi karaa kontoroolka fog, xitaa haddii aaladda xidhan tahay.
USB-C si ay ugu soo dallaco kontaroolaha cusub
Qofka (dadka) la yimid fikraddan Apple Remote waxay jeclaan lahaayeen inay yeeshaan Heerka USB-C si loogu soo dallaco qalabka oo markaa aan awoodno inaan adeegsanno ku dhowaad wax kasta oo fiilo ah oo aan ku haysanno guriga si aan ugu buuxinno batteriga Apple Remote-kan cusub. Dabcan waxay noqon laheyd mid waxtar badan maxaa yeelay waxaan ku keydin laheyn fiilooyinka cusub umana baahnin inaan raadino fiilada saxda ah ee qalab kasta. Waa fikrad, markaa waxaan ku raacsanahay inaad rabto tan fasalka xeedho.
Raadi My Apple Remote
Mid ka mid ah waxyaabihii ugu horreeyay ee ay ahayd inaan sameeyo markii aan iibsanayay Apple TV-ga waxay ahayd inaan qolka hareerihiisa ka raadsado rumuutka maxaa yeelay ma aanan aqoon meesha aan uga tagay Sida had iyo jeer wuxuu saarnaa kursiga fadhiga, laakiin isagoo aad u yar oo yar ayaan arkay iyaga waxaanan doonayay inay helaan. Iyada oo fikraddan Apple Remote loo maareeyay sida haddii ay tahay iPhone, si dhakhso leh ayaan ku heli karnaa. Haddii Apple rabtay inay ku darto jabkii U1 meelaha fog fog, xitaa waxay isku dayi karaan inay soo bandhigaan goobta saxda ah ee gurigaaga.
Laakiin wax yar ayaan sii soconnaa. Goosasho u gaar ah Haddii aan ku darno Apple Watch waxqabad "dhawaaq" ama "gariir" fog sida iPhone, waxaan ka heli karnaa si ka dhaqso badan oo uu hagayo dhawaqa. Ku daris xiiso leh Raadi My Apple Remote.
Shaashad badan oo taabasho badan
Cabbirka taabashada ayaa isbeddeli kara duulimaadka oo u oggolaanaya aaladda inay soo bandhigto qaabab badhan oo kala duwan. Waxaa ku jiri kara shaashadda "Hadda Ciyaar" iyo ku arag meesha waxa aan ku aragno Apple TV. Barnaamijyada dhinac saddexaad ayaa laga yaabaa inay muujiyaan nashqadaha durugsan ee fog ee ku daraya badhanno cusub ama beddelaya taabashada. Dabcan dhammaan meelaha fog fog waxay ku isticmaali lahaayeen Siri makarafoon lagu dhex-dhisay. Natiijooyinka ayaa xitaa si toos ah ugu muuqan kara koontaroolka fog halkii ay ka ahaan lahaayeen telefishanka.
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu wanaagsan ee fikraddan fog ay tahay shaashad u gaar ah "sii wad daawashada". Waxaad bilaabi laheyd inaad si toos ah show ugala hadasho meesha fog halkii aad ka mari laheyd shaashadaha tvOS. Sidoo kale, haddii aan adeegsan lahayn saldhigga watchOS, waan kari karnay hubi iibsashada iyo kirada si toos ah Apple Remote oo leh Touch ID iyo Apple Pay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Tani waa sida cajiibka ah ee fikraddan Apple Remote cusub ee Apple TV u egtahay
Afka kaarka SD wuxuu dib ugu noqon karaa barnaamijka 'MacBook Pro'
Sida laga soo xigtay Mark Gurman Aqoonsiga Face-ka kuma imaan doono cusbooneysiintan iMac